उदयपुरको दुर्गम गाउँमा जन्मेकी राई जसले अहिले खान्छिन् २ करोडभन्दा बढी तलव ! – Yuwa Aawaj
चैत्र ५, २०७७ बिहिबार 407
विश्वका २ दशमलव ७ बि’लियन भन्दा बढी मानिस’हरुले फेस’बुक चलाइर’हेको एउटा रिपोर्टले देखाएको छ । डाटा अनुसार नेपालमा भने कुल जनसं’ख्याको ३४ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५ लाख २० हजार ज’नाले फेसबुक चलाइ’रहेको देखिन्छ । – ताजा खबर
Prevजगदम्बा स्टिलको उद्योगमा लगाइएको तालाबन्दी प्रशासनले तोड्यो !
Nextगौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको दोस्रो ‘कुर्सी’ बिक्री !
सरकारनै गर्छ खाडीका नेपालीलाई बिभेद – सस्तोमा यात्रु बोक्ने एयरलायन्सलाई एउटा मात्रै उडान ।